ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(3) | Lumyo Chit
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(3)
January 13, 2012	By lumyochit	Like
1309 ယောက် ကြည့်ပြီးပြီ
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 1:11pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပသီအမျိုးသားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ၊ ပသီအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရေး
အတွက် (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနင်္ဂနွေ နေ့မွန်လွဲ ၁း၃၀ နာရီတွင် အမှတ် (၄၀) ၊၁၅၅ လမ်း ၊
တာမွေမြို့နယ် ၊ တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းအစ အန ရရှိထားပါတယ်။၎င်းတို့နှင့်
ဆက်သွယ် နိုင်ရန် ကြိုးစားနေ ပါတယ်။အားလုံးတတ်နိုင်သလောက် ကူညီမှ ပြည့်စုံသော
ပသီသမိုင်း အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာ နှင့်ဖြစ်စေ၊မြန်မာ စာ
ဖြစ်စေ ပသီ အထောက်ရနိုရင်တင်ပေးပါ။
ဒီစာအုပ် (၀မ်းအိုဝမ်း(ဦး)ကျော်ဝင်းမောင်ရေးတဲ့ “တိမ်ကောပျောက်ကွယ်နေသော ပသီလူမျိုးစု
အမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခြင်း” ) ရှိတာတော ကြားပါတယ်။လက်ထဲတွင်မရှိဘူး။
မောင်လျှောက်(မြယာမြေ) ထံမှာ ရှိတယ်ကြားသိရပါတယ်။ ဒီစာအုပ် MMSY မန်ဘာ ကိုသက် ကိုထံပို့ပေးနိုင်ရင်
အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ်မည်။ကိုသက်ကို ထံ ကျွန်တော် မေးလ် ပို့ထားပါတယ်။ မောင်လျှောက်(မြယာမြေ)
၏ဆက်သွယ်နိုင်သော လိပ်စာကို ရေးပေးပါ။ စလာမ်
၀မ်းအိုဝမ်း(ဦး)ကျော်ဝင်းမောင်ရေးတဲ့ “တိမ်ကောပျောက်ကွယ်နေသော ပသီလူမျိုးစုအမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခြင်း”
စာအုပ်က မမလ ၆၄ နှစ်စာစောင်မှာပါတာ၊ I ဆီမှာတော့ရှိတယ်။စာရိုက်ဖို.ကIအချိန်မရှိလို.ပါ။လိုအပ်ရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
စလာမ် ကိုတင်မောင်ရေ ………..
၀မ်းအိုဝမ်း(ဦး)ကျော်ဝင်းမောင်ရေးတဲ့ “တိမ်ကောပျောက်ကွယ်နေသော ပသီလူမျိုးစုအမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ခြင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးရှိရင် / မရှိရင်လည်း ရှာဖွေပြီး တင်ပေးပါဦး ……. မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်ထားတာလို့ သိရပါတယ် …..
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 1:49pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
သူတော်စင်ရွှေဘိုသခင်ကြီး(၄) ပါး ပသီဟုတ်မဟုတ် နှင့် အငြင်းမပွားလိုပါ။၎င်းခေါင်းစဉ်အောက်တွင်
( ပသီ )ဆိုတဲ့စကားကို အထောက်အထားအဖြစ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစာသားထဲက သမိုင်းသည် ပသိ
အတွက်အထောက်အဖြစ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းပန်ကြားပါသည်။ – စလာမ်
သူတော်စင်ရွှေဘိုသခင်ကြီး(၄) ပါးထဲက ပသီစကား
ဆရာကြီးလေးပါးမှာ ပြည်ရွှေဘိုတွင် စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့သူများမဟုတ်ပဲ ဒေသခွဲများတွင် နေထိုင် သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ဘုရင်မင်းမြတ် အမျက်တော်ရှ၍ ဆင့်ခေါ်တော်မူချိန်မှသာ ရွှေဘိုမင်း နေ ပြည်တော်သို့ စုရုံးရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး ပြစ်ဒဏ်သင့်ခံခဲ့ရသော သူတော်စင် အစ္စလာမ်သာ သနာ ၀င်ကြီးများဖြစ်ကြပါသည်။
ဦးအောင်ဇေယျသည် ၁၇၅၉-ခုတွင် ယိုးဒယားသို့ စစ်မထွက်မီ တိုတောင်းလှသောကာလ၌ သာသ နာ့ဂိုဏ်းကွဲများ ပေါ်ပေါက်သည်ကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ၀ိနည်းတော်နှင့်အညီ ရဟန်းတော်များကို ကျင့်သုံး စေသည်။ ၀ိနည်းတော်ကို မရိုမသေ မလိုက်နာသူတို့အား ဒဏ်ခတ်စေရန် မဟာဒါန်ဝန် ခန့်အပ်သည်။ ၁၇၅၉-ခုနှစ်တွင် သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ကိုးကွယ်မှု အမျိုးမျိုးအား သန့်ရှင်းစေခဲ့ရာ ပသီမွတ်စ်လင်မ် တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအား မေးမြန်းစဉ် ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏား၏ လျှောက်တင်မှုအရ ပသီမွတ်စ်လင်မ် တို့အား ဆင့်ခေါ်တော်မူပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်း ခဲ့သည်တွင် သာ သနာ့ယုံကြည်ချက်အား လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားစကားနှင့် ညီညွတ်သည်ဟု မင်းတရားကြီးထင်မှတ်တော်မူပြီး ဆရာကြီး(၄)ပါးအား အယူလွဲမှားနေသည်။ တရားဒေသနာတော် ဟောကြားပြုပြင်ရန် အချုပ်အာဏာသားတို့လက်သို့ လွှဲအပ် ခဲ့သည်။
မလိုက်နာငြင်းဆန်က စီရင်ရန် အမိန့်ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ဆရာကြီး(၄)ပါးတို့မှာ နောက်သား မြေးတို့ အရေးမြော်တွေးပြီး ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီး(၄)ပါးကို ခေါင်း ဖြတ် သတ်လိုက်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ဥပ္ပါပျံ၊ တော်လဲ၊ ငလျင်လှုပ်၊ မှောင်ကြီးကျပြီး ကုန်းဘောင် ရွှေပြည်တွင် မိုးကြိုး(၁၃) ချက် တစ်ပြိုင်တည်းပစ်ခတ်သည်။ ဤနမိတ်အား ဘုရင်မင်းမြတ်မှ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာကျော် များအား ခေါ်ယူမေးမြန်းတော်မူရာ လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးတို့တွင် မည်သည့်လူမျိုးဘာသာ ယုံကြည်မှုကိုမှ ညှဉ်း ပန်းနှိပ်စက်၊ မပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း၊ ယခုအဖြစ်အပျက်မှာ တစ်ရာ့တစ်ပါးသော လူမျိုးမှ သူတော်စင် တို့ သွေးမြေကျ၍ ဤသို့ အတိတ်နမိတ်ကြီးများပြပါသည်။ (၃)နှစ်မိုးခေါင်ရန် ကိန်းရှိပါ ကြောင်း ပညာ ရှိ များမှ လျှောက်တင်ကြသည်။
ဘုရင်မင်းမြတ်မှ ဆရာကြီး(၄)ပါး အခြေအနေ၊ ကျွန်ယုံတော်များအားမေးတော်မူရာ ဆရာကြီးတို့ မ ချေ မငံပြု၍ လက်လွန်သွားကြောင်း သံတော်ဦးတင်ရာ အသင်တို့ မိုက်မဲလေစွတကားဟု အပြစ် တော် တင်ကာ မလိုတမာကုန်းချောသည့် လက်သုံးတော် ၀င်္ကပုဏ္ဏားအား ထောင်သွင်း၍ အကျဉ်း ထားစေ အမိန့်တော်သတ်မှတ်ပြီး ဆရာကြီး(၄)ပါး ခန္ဓာဝန်ချရာနေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ခြ တောင် ပို့(၄)လုံး ဖြစ်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင် အမှန်ပင်သူတော်စင်များပါတကားဟု ယူကျုံး မရဖြစ် ကာ ၎င်းနေရာကို မင်းမှုထမ်းများအား သဲဖြူခင်း၊ ရာဇမတ်ကာပြီး ရွှေထီး(၄)လက်မိုး၍ အစောင့် ထား ရန် အမိန့်တော် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နန်းတော်သို့ပြန်ပြီး ၀င်္ကပုဏ္ဏားမိုက်အား သတ်စေ ရန် အမိန့်ချကာ သုံးထောင်ခုနှစ်ရာ ဆရာကြီးမျိုးနွယ်များကို ဆင့်ခေါ်ပြီး မလိုတမာကုန်း ချောစကား ကြောင့် ယူကျုံး မရဖြစ်ရကြောင်း ဆရာကြီး(၄)ပါးကိုရည်စူး၍ ၀တ်ကျောင်းတော်လေး ဆောင်လှူဒါန်း တည် ဆောက်ပေးမည့်အကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မြေဒူးမြို့တွင် မှန်စီရွှေချဗလီကြီး(၄)လုံး တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များ အား ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။
မြန်မာဘုရင်ကို တင်သွင်းလွှာ (၁၂၄၅-ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလ)
ဘုရားကျွန်တော် မြေဒူးမြို့နေ သင်္ဘောဘလီဝင်၊ တကာကြီးငယ်တို့နှင့် ပသီကျောင်းထိုင် ဆရာ မို့ဟရစ်ဒင် ရွှေဘ၀ါးတော်အောက် ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်ပါသည်ဘုရား ။
အင်းဝမင်းဆက် စနေမင်းလက်ထက် မြန်မာသက္ကရာဇ် (၉၀၀)ကျော်က မွတ်စ်လင်မ်လူပေါင်း သုံး ထောင်
ခွန်နှစ်ရာတို့သည် ကာသီရွှေဝါ၊ ကာသီရွှေဒုံး၊ ကာသီပန်းဝါ၊ ကာသီမြတ်ကြာ မင်နာနုရပ်၊ မင်းန၀ါဟရပ်၊
မင်းသီဟရပ်၊ မင်းနေမျိုးဂုဏ္ဏရတ်တုိ့နှင့် ၀င်စားလာရောက်ရာ စားမြဲ နေမြဲ ပေးချ သနားတော်မူပြီးလျှင်
ရွှေချမှန်စီ ပလီ(၄)လုံး မြေဒူးမြို့အတွင်း တည်လုပ်သနားတော်မြတ်ခံရ၍ ကျမ်းဂန်နှင့်အညီ ကျင့်ဆောင်နေထိုင်ကြသည်နောက် ယခု ဘုရင်မင်းမြတ်ဘေးတော် အလောင်း မင်းတရားကြီးလက်ထက် မွတ်စ်လင်မ်လူမျိုးတို့ကို မမြင်ဘူးသည်နှင့် အပါးတော်တွင် ကျွန်ယုံ ပုဏ္ဏား ဂေါဝိန္ဒကိ မေးတော်မူရာ ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားက ၎င်းလူမျိုးတို့သည် ကြက်ငှက်ကျွဲနွားတို့ကို အရှင်လတ် လတ် လှီးဖြတ်သစား၊ အယူမှားသောသူ လူမျိုးဖြစ်ပါသောကြောင့် ဟင်ဒွတ်စတံဒလင်လိ (ဒေလီ) ဗာရာဏသီမြို့များက နှင်ထုတ်လိုက်သောသူများဖြစ်ပါကြောင်း ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်၍ ကျွန်တော် မျိုးဘေး၊ ဆရာကြီး မုဟမ္မဒ်ရှောင်ရှန်၊ ဆရာကြီး မိုဟစ်ဗွလ္လာ၊ ဆရာကြီးရှမ္မဒါရ်၊ ဆရာကြီးအွတ်သမံ တို့ကို အရတောင်းတော်မူပြီးလျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလွှတ်၍ ၀က်သားကိုစားရ မည်။ ရုပ်ပွား ဆင်းတုတို့ကို ရှိခိုးပူဇော်ရမည်။ ရာဇမာန်ပွား၍ ထောင်မှာ အကျဉ်းချထား၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊ အသက်ကို အသေသတ်မည်၊ ထုတ်ယူသွားရာ ၎င်းဆရာကြီး(၄)ပါးတို့သည် သုသာန်ဝမှာ ၀ိုဇူ သန့်စင် ၍ ဒိုရကအတ် နမာတ်ဖတ်ရွတ် ဒိုအာဆုတောင်းပြီးလျှင် ဦးချစစ်ဂျဒါတွင်းမှာ အသေခံသောကြောင့် ကောင်းကင်က အတိတ်ကြီးနမိတ်ကြီးပြသည်။ ငလျင်လှုပ်သည်။ ဥပ္ပါတ်ပျံသည်၊ တော်လဲသည်။ နန်းတော်ကန်တော့တိုင်ကို မိုးကြိုးပစ်သည်။ မှောင်ကျသည်။ နေမထွက် ကြယ်ပေါ်သည်။ နေ့ကို ညဉ့်အတိ ဖြစ်နေသည်။ နေ့ည၌မကွဲရှိနေသောကြောင့် ဂေါဝိန္ဒပုဏ္ဏားကို ထောင်မှာ အကျဉ်းထား သင့်၊ မသင့်ကို ချင့်ချိန်၍ အဆုံးစီရင်မည်။ ကြယ်သွားနေသွား အတိတ်ကိန်းခန်းကို နားလည် သူပညာ ရှိ တို့ကို ခေါ်၊ အမိန့်တော်နှင့်ခေါ်ပြီးလျှင် မေးတော်မူပြန်ရာ ၎င်းပညာရှိတို့က လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါးတွင် တစ်ပါးလူမျိုးကို မပယ်သင့်၊ ဦးခေါင်းကသွေးသည် မြေတွင်စွန်းငြိပါသောကြောင့် အစားအစာ မွတ် သိပ် ရန်၊ မိုးသုံးနှစ်မခြိမ်းမရွာရှိမည်။ မိုးမှောင်လည်း ခုနှစ်ရက်လည်မှ လင်းမည်၊ ထင်မြင်ပါကြောင်း ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်ကြ၍ သူတော်စင် မှန်မမှန်ကို သုဿာန်ဝမှာ အစောင့်နှင့်ထား၊ မိန့်တော်မူပြီးလျှင် ၎င်း ဆရာကြီးလေးပါးအလောင်းသည် မဖူးမရောင်၊ မသိုးမပုတ်၊ ကျီးငှက်တို့အချဉ်း မှောင်လင်း သည့် နောက် ခုနှစ်ရက်ရှိလျှင် ခြတောင်ပို့လေးလုံး အထူးအဆန်းသည်ကို ရွှေနားတော်မြတ် ကြားသိ တော် မူ၍ ရာဇမတ်ကာရန် ရွှေထီးလေးစင်းအုပ်ထားရှိသည့်နောက် မိုးသုံးနှစ်မခြိမ်းမရွာရှိသည်နှင့် မြေဒူးမြို့ သို့ ထွက်စံတော်မူ၍ မူးမြစ်တူးဖောက်၊ ရွှေဘိုကန်တော်သို့ ရေသွင်းတော်မူပါ ဆရာကြီး(၄)ပါးတို့ အဆက် အနွယ်ကိုခေါ်၍ ရှေးအစဉ်အလာ ဘာသာထုံးစံကျမ်းဂန်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်း ကျင့်ဆောင် ကိုးကွယ် စားသောက်နေထိုင်မြဲ ငြိမ်ဝပ်စွာနေထိုင်ရမည်။ အထက်ကနည်း ရွှေချမှန်စီ ဗလီလေးလုံး မြေဒူးမြို့ အတွင်း တည်လုပ်သနားတော်မူပြန်၍ ငါးနှစ်မြန်မာနှင့် ရောနှောရှိနေသည်ကို ၎င်းမင်း တရား ကြီး လက်ထက်ကစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စ်လင်မ်လူမျိုးတို့ ထင်ပေါ် စည်ပင်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းရွှေချမှန်စီ တည်လုပ်တော်မူခဲ့သည်။ သင်္ဘောဗလီသည် ပတိမ်းစားအရေးတွင် သူပုန်လူဆိုးတို့ ဖျက်ဆီးပျက်စီး၊ အမှုထမ်း ဆင်းရဲသားတို့ မတည်မလုပ်နိုင် ယခုတိုင် ဗလီဝင်လူတစ်ရာကျော်တို့သည် ၀တ်ဝါ ရိုဇာ နမာဇ် စောင့်ထိန်းရန် မရှိသည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ဘုရားကိုယ်စားတော်စားတည်လုပ် မစတော်မူလျှင် ကမ္ဘာထက်ဆုံးတိုင် ကုသိုလ်တော်သည် အခေါင်အဖူးထူးမြတ်လှသည်။ သိမ်ဗလီဖြစ်ပါ၍ တည်လုပ်မစ သနားတော်မြတ်ခံရပါမည့်အကြောင်းကို ရွှေဖ၀ါးတော်အောက် ရှိခိုးသံတော်ဦးတင်ပါသည်။
(မြေဒူးရှိုက်မိုဟ်ယစ်ဒီန် (ခ) ဦးရွှေတောင်ရေး ရှဂျရတွလ်အီမံကျမ်းနှင့် ဖွသာအေ့အလွတ်ရှဟူရ်ကျမ်း၊ ၂-ကျမ်းတွဲ စာ ၁၆၇-၁၆၉)
ဤသင်္ခါရလောကကြီးတွင် အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်အားရိုကျိုးသစ္စာရှိသော မွတ်စ်လင်မ် မောင်နှမ များ အား မတရားသတ်ဖြတ်၊ အနိုင်ကျင့်၊ နှိတ်ကွတ်ချင်းတို့သည် အချည်းနှီးဖြစ်သွားမည်မဟုတ်။ သေပြီး နောက် နောင်တမလွန်ဘဝ မဆိုထားဘိ၊ သည်လက်ရှိဘဝမှာပင် လူသားတို့၏ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားရမည်။
မွတ်စ်လင်မ်မောင်နှမများ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ထိုသခင်ကြီး ၄ ပါးနှင့် အမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအပြစ်မဲ့ မတရားသတ်ဖြတ်ခံရသော မွတ်စ်လင်မ်ရှဟီဒီများအတွက် ဇေရာဒဟ်ပြု၊ ဒုအာဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
*** ဒီပို့စ်အတွက်အဓိကကူညီပေးတဲ့ ညီမလေးဝိုင်း ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။***
၀ိုင်းPermalink ၀ိုင်း က December 21, 2011 – 1:49pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
စလာမ် ကိုတင်မောင်ရေ …..
“ပသီအမျိုးသားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ၊ ပသီအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရေး” မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုတင်မောင်ရေ … တစွန်းတစကြားမိတဲ့ သတင်းလေးတွေကို တိတိကျကျ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ သေချာစုံစမ်းပြီးမှ တင်ပေးစေချင်ပါတယ် …. အဲလို မဟုတ်ပဲ သတင်းအလွဲတွေ ဖြစ်နေရင် ဖတ်တဲ့သူတွေ အမြင်လွဲပြီး အတွေးလွဲသွားနိုင်ပါတယ် ………….
ဦးကျော်ဝင်းမောင်စာအုပ်က ဖတ်ဖို့ တလောကပဲဝယ်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုတင်မောင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း စာရိုက်ဖို့အချိန်မရှိလို့ ကိုတင်မောင်များ ရိုက်ပေးနိုင်မလားလို့မေးမိတာပါ။
ကိုတင်မောင်ရေးသမျှကို ခဏခဏလိုက်ပြီး cross လုပ်သလိုဖြစ်နေတာကိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကိုတင်မောင် တင်လိုက်တိုင်း အများစုက သတင်းလွဲဖြစ်နေတတ်လို့ပါ …..
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 2:16pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၁။ စူရာဖွာတေဟ စုပေါင်းဖတ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲစတင်ရန်
၂။ သဘာပတိ (ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရန်မာင် – ငြိမ်း)မိန့်ခွန်းပြောကြားရန်
၃။ ပသီအဖွဲအမည် အများဆန္ဒအရအတည်ပြုရန်
၅။ ပသီအမှုဆောင်အဖွဲ့ တွင်ပါဝင်လိုသူများပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ရေးသားရန်
၆။ ပသီအမှုဆောင်အဖြစ်ဆန္ဒပြုသူမျာ၏ အမည်စာရင်ကိုတင်ရန်
အချိန် (၄-၁၂-၂၀၁၀) တနင်္ဂနွေ နေ့မွန်လွဲ ၁း၃၀ နာရီ
နေရာ အမှတ် (၄၀) ၊၁၅၅ လမ်း ၊တာမွေမြို့နယ် ၊
ဖိတ်စာတစ်စောင် ကျွန်တော်လက်ထဲတွင် ရှိနေပါ၍ တပ်အပ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်
မလိုအပ် ၍ အားလုံးရေးမပြတောပါ။ဒီလောက်ဆို ယုံကြည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 2:21pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၀ိုင်းPermalink ၀ိုင်း က 26 မိနစ်အရင်က တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကိုတင်မောင်ရေးသမျှကို ခဏခဏလိုက်ပြီး cross လုပ်သလိုဖြစ်နေတာကိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကိုတင်မောင်
တင်လိုက်တိုင်း အများစုက သတင်းလွဲဖြစ်နေတတ်လို့ပါ …..
ကျွန်တော်လည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါ။အချိန်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ဖြေးဖြေးအချိန်ယူရိုက်သွားပါမယ်။
ကိုသက် ကို ကတဆင့်ပို့နှိုင်မနှိုင် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို ပို့နိုင်မလဲ စီစဉ်ပါ။စလာမ်
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 4:54pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
About Burmese Muslims
The Brief History of Burmese Muslim
The first Muslims arrived in Burma’s Ayeyarwady River delta, on the Tanintharyi coast and in Rakhine in the 9th century, prior to the establishment of the first Burmese empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan. These early Muslim settlements and the propagation of Islam were documented by Arab, Persian, European and Chinese travelers of the 9th century. Burmese Muslims are the descendants of Muslim peoples who settled and intermarried with the local Burmese ethnic groups. Muslims arrived in Burma as traders or settlers, military personnel, and prisoners of war, refugees, and as victims of slavery. However, many early Muslims also held positions of status royal advisers, royal administrators, port authorities, mayors, and traditional medicine men.
Persian Muslims arrived in northern Burma on the border with the Chinese region of Yunnan as recorded in the Chronicles of China in 860 AD. Bermese Muslims were sometimes called Pathi,aname believed to be derived from Persian. Many settlements in the southern region near present day Thailand were noted for the Muslim populations, with Muslims often outnumbered the local Burmese. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis,  and was ruled by three Indian Muslim Kings in the 13th century. Arab merchants also arrived in Martaban, Margue, and there were Arab settlements in the present Meik archipelago’s mid-western quarters.
During the reign of the Bagan King, Narathihapate (1255-1286), in the first Sino-Burman war, Kublai Khan’s Muslim Tatars invaded the Pagan Kingdom and occupied the area up to Nga Saung Chan. In 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied the area up to Bamaw (Kaungsin). Turk people (Tarek) were called Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays.[23
West Kone Yow Central M9osque, Mandalay.
The first Muslims had landed in Myanmar (Burma’s) Ayeyarwady River delta, Tanintharyi coast and Rakhine as seamen in ninth century, prior to the establishment of the first Myanmar (Burmese) empire in 1055 AD by King Anawrahta of Bagan or Pagan.  The dawn of the Muslim settlements and the propagation of Islam was widely documented by the Arab, Persian, European and Chinese travelers of Ninth century. The current population of Myanmar Muslims are the descendants of Arabs, Persians, Turks, Moors, Indian-Muslims, sheikhs, Pakistanis, Pathans, Bengalis, Chinese Muslims and Malays who settled and intermarried with local Burmese and many ethnic Myanmar groups such as, Rakhine, Shan, Karen, Mon etc.
The population of the Muslims increased during the British rule of Burma because of new waves of Indian Muslim Immigration.  This sharply declined in the years following 1941 asaresult of the Indo-Burman Immigration agreement, and was officially stopped following Burma’s (Myanmar) independence on4January 1948.
Panthay Mosque Mandalay,
Persian Muslims traveled over land, in search of China, and arrived northern Burma at Yunnan (China) border. Their colonies were recorded in Chronicles of China in 860 AD. Myanmar Muslims were sometimes called Pathi, and Chinese Muslims are called Panthay.  It is widely believed that those names derived from Persi (Persian). Bago Pegu), Dala, Thanlyin (Syriam), Taninthayi (Tenasserim), Mottama (Martaban), Myeik (Mergui) and Pathein (Bassein) were full of Burmese Muslim settlers and they outnumbered the local Burmese by many times. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis. Perhaps Pathein comes from Pathi. And coincidentally, Pathein is still famous for Pathein halawa,atraditional Myanmar Muslim food inherited from northern Indian Muslims. In Kawzar 583 (13th Century), Bassein or Pathein was known as Pathi town under the three Indian Muslim Kings.  Arab merchants arrived Martaban, Margue. Arab settlement in the present Meik’s mid-western quarters. 
During Bagan King, Narathihapate, 1255-1286, in the first Sino Burman war, Kublaikhan’s Muslim Tatars attacked and occupied up to Nga Saung Chan. Mongols under Kublai Khan invaded the Pagan Kingdom. During this first Sino Burman war in 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied up to Bamaw. (Kaungsin) (Tarek) Turk were called, Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays.  The Chinese General Mah Tu Tu managed the building ofamosque donated by the Yunnanese Muslim king, Sultan Sulaiman, in nineteen century in central Mandalay. The mosque is still maintained inavery good condition. Most of the Myanmar Chinese Muslims are staying around the mosque and it is well known as Panthay Mosque. That area is called Panthay Dan (Panthay Quarters)
keep reading(source wikepedia)
Credit : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vRD1xOKzhk4J:k&#8230;
ချစ်ဦးPermalink ချစ်ဦး က December 21, 2011 – 5:06pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပန်းသေးတွေလဲ ပသီထဲကို ထည့်၊
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 6:13pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
“ ဗမက မှ ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက် ”
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊မတ်လ မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကာလနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌ ကြီး မှ လမ်းညွှန်ခဲ့ သည်(ပထမဆုံစရမှာက၊ကျွန်တောတို့ပြည်တွင်းမှာ လူမျိုးစု ဘယ်လောက် ရှိသလဲ အဲဒီ လူမျိုးစုရဲ့ဇစ်မြစ် ၊
အရင်း အမြစ် ဘယ်နည်းဘယ် ပုံပေါက်ဖွါးလာကြသလဲ။
အထက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်အား ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေး ဝန်ကြိး ဌာန
( ပုံစံရေးသွင်ရန်ညွှန်ကြားချက်(၉-၁၂-၁၉၇၂ ) ထုတ် လူမျိုးများ စာရင်း စာမျက်နှာ ၄၃ -။တွင် –
အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၁၄၄) ထိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အမည်စာရင်းကို ကျေညာ ထားပါသည်။၎င်းအနက် မွတ်ဆလင်
အမှတ်စဉ် ( ၁၃၇ မှ ၁၄၁ ) ထိကို ရွေးထုတ်၍ အောက်တွင်ဖေါ်ပြပါသည်။
အမှတ်စဉ် (၁၃၇)။ – ဆလုံ (ပသျှူး)
အမှတ်စဉ် (၁၃၈)။ – ရခိုင် – စစ်တကောင်း -(မှတ်ချက် ။ ။ရိုဟင်ဂျာကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။)
အမှတ်စဉ် (၁၃၉)။ – မြန်မာမွတ်ဆလင် – (မှတ်ချက် ။ ။ပသီ ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။)
အမှတ်စဉ် (၁၄၀)။ – ရခိုင် – ကမန်
အမှတ်စဉ် (၁၄၁)။ – မြေဒူး
၁။ – ၁၉၄၅ – ခုနှစ်တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ခေါင်းဆောင်ပြီး ဗမာမွတ် ဆလင်အမျိုး
သား ကွန်ဂရက် ( ဗမက) ကိုဖွဲ့စည်း၍ (ဖဆပလ) တပ်ပေါင်းစု တွင် ပါဝင်ကာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။
၂။ – ၁၉၄၅ – ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် “(ဖဆပလ) “အဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံတွင် ဗမာမွတ် ဆလင် များကို တိုင်းရင်းသား လူနည်းစ
ု တို့ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများပေးရန် သဘောတူကြောင်းအဆိုကို ဒီးဒုတ် ဦးဘချို က တင်သွင်းအ တည်ပြု ခဲ့သည်။
(၄-၂ ၁၉၄၂ ) – ခုနေ့ထုတ် “ ဒီဒုတ် ဂျာနယ် “ စာမျက်နှာ( ၃၁ ။ ၃၂ ၊ ၃၃ ) တွင်” ဖဆပလ “အဖွဲ့ချုပ်ကြီးက တိုင်းရင်း သား လူနည်းစုပြသနာဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။ – —ဟူခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ( မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ သဘင် ကြီး တွင် အဆို
အအမှတ် ၆ – ဖြစ်သော လူနည်းစု အရေးကို ဒီးဒုတ် ဦးဘချို ရှင်းလင်းချက် ။) အကြောင်း အ ကျယ် တ၀င်း ဖတ်ရှူလေ့
၃။ – ၁၉၄၈ ခုနှစ်ှစ၍ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်က ဗမာမွတ်ဆလင် အမည် မှာ လူမျိုးအမည် နှင့် ဘာသာ အမည် တွဲဖက် ထားသဖြင့် ပြောင်းပေးရန်”( ဗမက ) “အဖွဲ့ချုပ် သို့အသိ ပေးခဲ့သည်။
၄။ – ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဗမက ကို ဖျက်လျှင် ဖျက် ၊ မဖျက်လျှင် ဖဆပလ က” ဗမက “ ကို ပေးထား သည့်ဝန်ကြီးနေရာများ ရုပ်သိမ်းမည် ဟု ရာဇသံ ပေးလိုက်သည်။
၅။ – ၁၉၅၆ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဗမက ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
၆။ – မကျေနပ်သည့်ခေါင်းဆောင်အချို့က ၁၉၅၆ – ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၁) ရက် နေ့မှ၍ “ဗမက(သစ်)
၇။ – ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဗမာမွတ်ဆလင်ဟူသော အမည်မှာ ပြည့်စုံသည့်အမည် မဟုတ် သဖြင့် “(ပသီ)လူမျိုး ပသီအမျိုး
သားကွန်ဂရက် “ဟူ၍ အမည်ပြောင်းပြီး ၁၉၆၁ – ခုနှစ် မှစ၍ ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက် အဖြစ်ရပ် တည်ခဲ့သည်။
၈။ – ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ မှငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို “ပသီ အမျိုး သားဂရက်”မှ ပထမဆုံး
၉။ – ၁၉၆၄ – ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီက အဖွဲ့အစည်းအားလုံးဖျကိသိမ်းရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည့် အခါ “ ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက် “ကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း သူက ပသီလူမျိုး ၊သူကရိုဟင်ဂျာ ၊သူက ပန်းသေး၊
သူက ကမန် ၊ …..ဇေရ်ဘာဒီ ၊ ကပြား ၊ ဗမာ သူက သွေးစစ်တယ်၊ သူက မစစ်
ဘူး။သူက ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်။စသည်ဖြင့် ပြောချင် သလိုပြောနေသော်လည်း
Anti- muslim တွေက အားလုံးကုလားဆိုပြီး တစ်အုပ်စု၊တစ်မျိုးတည်းစာရင်ထည့်
သွင်းပြီး ရေတွက်နေတာကို အရင်ဆုံးသတိပြုမိဖို့လိုတယ်။နွားကွဲရင်ကျားကိုက်မယ်။ အရင်းဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံ
မွတ်ဆလင် ဆိုတဲ့ လူတစ်စုက ဘယ်ခေတ်၊ ဘယ်အခါက ပင် ရောက်လာသလဲ ဆိုတာ ကို ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားများကိုရှာဖွေစုဆောင်း ဖို့လိုနေတယ်။အားလုံး ကုလားစာရင်း မှာ ထည့်ပြီး Indian လို့အော်ဟစ်နေတဲ့
အချိန် အခါ မှာ ကျွန်တော် အချင်းချင်း က သူက ပသီ ၊မဟုတ်ဘူး။ သူက ကမန်မဟုတ်ဘူး။ စသည်ဖြင့်ခွဲခြားမယ် ဘာအကျိုးရှိသလဲ။အဖွဲ့အစည်းပေါ်လာရင် သူတို့ က မူဝါဒချ မှတ်ပြီးလုပ်ဆောင်စရာပေးလိမ်မည်။
ပသီနာမည် မှတ်တင်ခွင့်ရမရ တော မသေချာ ဘူး။ဒီ ပသီ လူမျိုးနာမည်ကို ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကတည်းက ဘေးဖယ်ထားစဉ်းစားပါအုန်း။မှတ်ပုံတင်ခွင်ရမဲ့ ရာခိုင်နုန်းက၁ % တောင် မမျော်လင့်ဘူး။ကျွန်တော်က သူတို့အထဲမှာ နေတဲ့သူပါ။ဒီဟာ အခုရေး တာလဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ရေးနေတာပါ။ပြောပြ လို့လဲမရဘူး။အကောင်းဆုံးက မသိ မ သာ
မွတ်ဆလင် များကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ချန်ထားတဲ့စကားတွေ ရှိတယ်။ မိမိဖါသာ တွေးခေါ်
ယူနိုင်ပါစေ။ဒါဟ တော်တော်ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တို့ တတွေကို လဝက တာဝန်ပေး မထား ဘဲ လဝက အလုပ်မလုပ်ဖို့ အရေးကြီး တယ်။ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးမှာ အမြီးမရှိသလို ကမန် လူ မျိုး မှာ ဦးချိုး မရှိဘူး။အလားတူဘဲ အခြားခြားလည်းဒီသဘော လို့ထားလိုက်ပါ။
အဘစွာPermalink အဘစွာ က December 21, 2011 – 6:41pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကျတော် ဆိုဒ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပသီ လူမျိုးတွေမျက်နှာတွေရှိလို့ ဘာမှဝင်မပြောတော့ပါ။။ ဒါပေမယ့် ပိုပိုဆိုးလာလာတယ်..ဦးလေးအနေနဲ့ ပသီ လူမျိုးအကြောင်းတင်ရင်တင်ပါ..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ဦလေး ဆိုသလို..မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသမျှ..အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အားလုံး ပသီလို့ ဆွဲထည့်တာကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး…
ပြီးတော့ အဓိက နဲ့ သာမည လည်းသိစေချင်ပါတယ်။လက်ရှိ ပသီ အရေးက လုံးဝ မေဂျာဖြစ်နေရင်..ဂျာနယ်တွေ..
အွန်လိုင်းတွေမှာ ပလူပျံနေအောင် တက်နေတာမြင်ရမှာပေါ့..လက်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ချင်းဇာတ်တူသားတွေ ..မြိန်မြိန်လျက်လျက်
စားနေကြတဲ့ ဟာဂ်ျ ရိုက်စား ကိစ္စတွေ ဗလီဆောက်ဖို့ခက်တာတွေ..နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမရတာတွေ.. အများကြီးပါ..
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 21, 2011 – 7:18pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကိုစွာလေ ဆီက အရင် စာ ၂ စောင် ဝင်လာပြီး ဖတ်ဖို့မရလိုက်ဘူး။ကိုစွာလေ ဖျက်ပ လိုက်တာကို တွေ့ရတယ်။အခု
ကိုစွာလေ စာကို ဖတ်ပြီး သိနေပါ ပြီ။ကျွန်တော်လုပ်နေတာကဘယ်သူက ဘာလူမျိုး၊ညာ လူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ဒီပသီ ဆို တဲ့
လူမျိုး တစ်မျိုး တစ်ချိန်က ရပ်တည် ခွင့် ရပါလျက် နှင့် ပသီ နာမည် ကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်။မြန်မာ မွတ်ဆလင် ဆို ပြီး
ပုံစံရေးသွင်းချက် အမှတ်စဉ် (၁၃၉ )မှာရေးထားတယ်။
အလားတူ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး ရှိတဲ့ နာမည် ရခိုင် – စစ်တကောင်း လို့ အမည်ပြောင်းထား တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပသီဆို တာ
ယနေ့ မြန်မာ မွတ်ဆလင် တွေနဲ့ ရော ထွေးရှုပ်ထွေး အောင် လုပ်ပြီး ပသီးဆို တဲ့ စကားပါပျောက်သွားလိမ်မည်။
ဒါနဲ့ ယနေ့ လူပုဂ္ဂိုလ် အားဖြင့် ဘယ်သူဘယ်ဝါ လူတစ်ယောက်ချင်း ကို သွားပြီး သူက ဘာဖြစ်တယ် ၊သူက
ညာဖြစ်တယ် လို့ ပြောဖို့  အလုပ် ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် အလုပ် ဒီလူမျိုး
တကယ်ရှိတယ် ။ဘယ်လို အထောက် အထားမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ပသီဆို တဲ့ ဝေါဟာရ
အသုံးအနုံး က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ခိုင်မာတဲ့ ကျောက်စာ တို့၊ ဘုရင့်ပြန်တမ်း တို့
က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ တစ်ခါ (၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင် မီက အထေက် အထား
ဖြစ်စေချင်တယ်။ကျွန်တော် ပသီအတွက်ရှာပေးနိုင် တာကို မွတ်ဆလင် စိတ်ဓါတ် ၊အမျိုးသား
စိတ်ဓါတ် ဓါတ် နှင့်လုပ်ပေးသွားမယ်။လက်တွေ့ဘယ်သူပါတယ်၊မပါဘူး ကျွန်တော် အလုပ်မဟုတ်ဘူး။
သီးသန့် သမိုင်းအထောက် အထားရှာနေပါတယ် လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အထားရှာနေတဲ့အချိန် မှာနားလည်မှု မလွှဲစေချင်ဘူး။
စလာမ် – ကျေးဇူး
အဘစွာPermalink အဘစွာ က December 21, 2011 – 9:59pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ကိုစွာလေ ဆီက အရင် စာ ၂ စောင် ဝင်လာပြီး ဖတ်ဖို့မရလိုက်ဘူး။ကိုစွာလေ ဖျက်ပ လိုက်တာကို တွေ့ရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျတော်ဆိုဒ်တွင်းရှိ ပသီလူမျိုးဝင်တွေ မျက်နှာထောက်ပြီးဖျက်လိုက်တာပါ
အခုကိုစွာလေ စာကို ဖတ်ပြီး သိနေပါ ပြီ။ကျွန်တော်လုပ်နေတာကဘယ်သူက ဘာလူမျိုး၊ညာ လူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ဒီပသီ ဆို တဲ့
လူမျိုး တစ်မျိုး တစ်ချိန်က ရပ်တည် ခွင့် ရပါလျက် နှင့် ပသီ နာမည် ကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပသီ လူနည်းစုလူမျိုးအတွက်..သောကအထူးထားပြီး ဆောင်ရွက်နေကိုသိလို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျ ထပ်ပြီးတော့လည်း..
ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကိုလည်း ဆောင်ရွက်လက်စတွေကိုလည်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ.
မြန်မာ မွတ်ဆလင် ဆို ပြီးပုံစံရေးသွင်းချက် အမှတ်စဉ် (၁၃၉ )မှာရေးထားတယ်။
အလားတူ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး ရှိတဲ့ နာမည် ရခိုင် – စစ်တကောင်း လို့ အမည်ပြောင်းထား တယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတာ ပသီကိုရည်ညွန်းတယ်ဆိုရင်..ကျန်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကပြား မွတ်စလင်များလည်း ပသီလို့
ဆိုလိုတာခင်ဗျ ?ကျတော်မှတ်ပုံတင်ထဲမှာ အန္ဒိယ ပလောင် ရှမ်းလို့ ရေးထားတယ်ဗျ..အကိုရဲ့ မှတ်ပုံတင်ထဲက လူမျိုးသတ်မှတ်
ချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ..အခု ပသီလူမျိုးလို့ခံယူပြီး ပသီလူမျိုးအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများရဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေထဲမှာ
အဲဒါနဲ့ ပသီဆို တာယနေ့ မြန်မာ မွတ်ဆလင် တွေနဲ့ ရော ထွေးရှုပ်ထွေး အောင် လုပ်ပြီး ပသီးဆို တဲ့ စကားပါပျောက်သွားလိမ်မည်။
ပသီ နဲ့ မြန်မာ မွတ်စလင် နဲ့ က တခြားစီပါဗျာ..ပသီ လူမျိုးက မပျောက်သွားပါဘူး..အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်ချဗျ..ရန်ကုန်မှာ တလောတုန်းက အခု လက်တလောမှမှတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့ ပါတီက တာဝန်ရှိသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ပသီအရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်.. အဲဒါတွေကို သေချာစုံစမ်းလိုက်ပါအုံး…
ညာဖြစ်တယ် လို့ ပြောဖို့  အလုပ် ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေးအလုပ်မဟုတ်သလို ကျတော်အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော် အလုပ် ဒီလူမျိုးတကယ်ရှိတယ် ။ဘယ်လို အထောက် အထားမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ပသီဆို တဲ့ ဝေါဟာရ
က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဲဒီ ထဲမှာ တစ်ခါ (၁၈၂၃ ) ခုနှစ် မတိုင် မီက အထေက် အထား
သမိုင်းကို ဖက်တွယ်ပြီး စုံလုံးကန်းပြီး မိုက်နေရမယ့် အချိန်မဟုတ်သလို လက်ရှိအနေထားကိုလည်း
။ကျွန်တော် ပသီအတွက်ရှာပေးနိုင် တာကို မွတ်ဆလင် စိတ်ဓါတ် ၊အမျိုးသား
ပသီသမိုင်းကို ယခင်က စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်ထားပြီးရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်တွေတောင် ဦးလေးလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ လူတွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်ပြီး ပိုစ်တခုမှာ ပသီအကြောင်း တကြောင်းလောက်ပါရင် အဲဒီပိုစ်တခုလုံးကို ပသီပိုစ်ဆိုပြိး တင်သင့်တယ်လို့ ခင်ဗျားထင်နေပါလား? အဲဒါလား သုတေသန?။သမိုင်းဆိုတာ copy paste လုပ်ရုံနဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားရှာဖွေစုဆောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်လေ့လာ စုဆောင်းမယ့် သမိုင်းကို အဆိုးအကောင်း အားလုံးလက်ခံသိရှိထားရပါမယ်။
အကောင်းတွေကြီးပဲ နဲ့ သမိုင်းတခုက ဖြစ်မလာပါဘူး။။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ..ကျတော်နားလည်မှု မလွှဲချင်တာထက် ဦးလေးလုပ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ပသီ သမိုင်းပျက်သွားမှာ စိုးလို့
kotinmaungPermalink kotinmaung က December 22, 2011 – 3:39pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
← ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( ၂ )	ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ(4) →